Classifieds, Personal Ad. » အလှူခံဗျို့ အလှူခံ . . .	101
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုခင်ခ က ကျပ် သုံးယောက်စာ ကျပ် သုံးသောင်း သုံးထောင် လှူဒါန်း ထားပါကြောင်း
padonmar says: အရီးလတ် -ထူးချွန် ၁၀၀၀၀+ကလေးစုံ-၁၀၀၀၀=၂၀၀၀၀
အဲဒါလာပြောတာ… အခု.. Suu Foundation က.. မြန်မာပြည်ဆင်းနေတယ်..။
ဦးကြောင်ကြီး says: အယာတိုလာ ဦးမာမွတ်.. အဲဒိ ပိုက်ဆံက သာမန်ခလေးတွေ ကျောင်းစာရိတ် ထောက်ဖို့.. ခီမြှားဆီစိမ်ဒဲ့ ပညာထူးချွန်ဆုနဲ့ ဘာမှမစိုင်။ ထူးချွန်တဲ့ ကျောင်းသားထဲ မပါခဲ့ဘူး.. ဒီတော့ စာတော်ဒဲ့သူဆို မုန်းဒယ်။ စာတော်တဲ့သူ နောက်ဆုံး ဘာဖျစ်သလဲ ခိုနီဖြစ်တာပဲ မုန့်လား။ အခြား ဝေးဝေး မကြည့်နဲ့.. ခိုနီ အာတီဒုံဂျီးကိုပဲကြည့်။
kotun winlatt says: ဟားးးးးးးး အူးကျောင် အလှူဒေါ့ သာဓု သာဓု သာဓု ခေါ်သဗျ
မြစပဲရိုး says: ဟေး …..
kotun winlatt says: ကျေးဇူးပါ အောင်ရဲလင်း ထက်မက အောင်ရဲလင်းနဲ့ တူတဲ့ အလင်းဆက်ရေ
Alinsett @ Maung Thura says: မမရွှေအိကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း….
ဒီစာရင်းတွေ သူသာ လုပ်မပေးရင်… ပိုစ့်ထဲ အဲ့လိုလေး မရောက်နိုင်ပါကြောင်း… ပုံ / အောင်ရဲလင်းထက်တောင် အောင်ရဲလင်းနဲ့ ပိုတူသူ..
Ma Ei says: မြို့ လယ်ကနေ ရွှေအိ CB Bank ကိုငွေလွှဲခက်နေတာမို့ အလှူငွေဘယ်လိုပေးရပါ့မလဲမသိ…
Shwe Ei says: -အကောင့်ထဲကို လွှဲဖို့ခက်ရင် .. ဘဏ်ကိုဘဲ မှတ်ပုံတင်နဲ့ လွှဲလို့ရတယ် အမ..
-အနီးအနားမှာဆိုရင် မြေနီကုန်းမှာရှိတဲ့ ဘယ်ဘဏ်ကို မဆိုလွှဲလို့ရတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ကျနော်များ “အောင်ဇေမင်း ကုမ္ပဏီလီမီတက်” မှ…
အလှုတော်ငွေ ကျပ်-၂၀၀၀၀ ပါခင်ဗျား ၊ ကိုအမတ်မင်း လွှဲပေးပါလိမ့်မယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4718
padonmar says: အရီးလတ် -ထူးချွန် 10000+ ကလေးစုံ 10000
Shwe Ei says: -အကောင့်ထဲကို အာတီဒုံလွှဲလိုက်တဲ့ ပဆံဝင်ဘီခည…
-မနက်ဖန်မှ အလင်းဆက်ဆီကို အလှူငွေစာရင်း အပ်ပဒိတ်ထပ်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: ကတိအတိုင်း.. ၁သိန်းပို့လိုက်ပြီဗျို့…
Shwe Ei says: -အန်တီအိ အလှူငွေ ၃၁၀၀၀ကျပ် သွားထုတ်ပီးကြောင်း သတင်းပို့ပါသည်။
kotun winlatt says: ရွာသူ မနှင်းပြုံး snow smile မှလည်း စာရေးကိရိယာ အလှူအတွက် တစ်သိန်းကျပ် ထည့်ဝင်လှူဒါန်းထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အလှူရှင်များအား ကလေးများ အားလုံးကိုယ်စား ကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက်စွာ သာဓု သာဓု သာဓု ပါခင်ဗျာ။
kotun winlatt says: မန်းလေးမြို့ ကိုပေမှလည်း ကျောင်းး ငါးယောက်စာ ၁၀၅၀၀ ကျပ်ကို လှူဒါန်းပါသည်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုပေါက်နှင့်ရုံးအဖွဲ့သားများ မှ ကျပ် တစ်သိန်းနှစ်သောင်းငါးထောင့် နှစ်ရာ(125200) လှူဒါန်းထားပါသည်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်ရုံးအဖွဲ့မှ ထပ်မံကောက်ခံရရှိငွေ သောင်းတစ်ထောင်လေးရာကျပ် ဖြစ်ပါတယ်
kotun winlatt says: မန်းလေးမြို့ ကိုခင်ခတူမဖြစ်သူမှလည်း ၁၁၀၀၀ ကျပ် လှူဒါန်းပါတယ်ခမျ
Alinsett @ Maung Thura says: ရန်ကုန်က စာရင်းကတော့ မရွှေအိက စာရင်း လုပ်ပေးပြီး
အားတဲ့အခါ ကျနော်က ပိုစ့်ထဲ ထပ် ဖြည့်ပေးမယ်လေ ဒီအတိုင်းပဲ ရတယ်ဆိုလည်း ok တယ်ဆို ok ပါ လိုစ့်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒါဇင်ပလပ်မှ ပို့လိုက်သော ဗလာစာအုပ်များ မန်းလေးကို ရောက်လာပါပြီ